Wasiir Ka Tirsan Soomaaliland oo Laga Helay Coronavirus – Goobjoog News
Wasiirka maalgashiga iyo hormarinta Soomaaliland Maxamed Axmed Cawad ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku shaaciyay in laga helay fayraska COVID-19 ka dib baaritaan lagu sameeyay.
Mr Cawad ayaa sheegay in haatan xaaladdiisa caafimaad ay tahay mid wanaagsan isaga oo xusay inuusan jirin wax xannuun ah oo uu dareemayo.
Dhanka kale Soomaaliland ayaa maanta oo ah Talaado 02-06-2020 waxa ay sheegtay in deegaannadeeda laga helay kiisas la xiriira safmarka Coronavirus ka dib markii baaritaan lagu sameeyay dad looga shakiyay xanuunka oo gaaraya 1401 qof.
Wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo soo saaratay warbixinta maalin laha ah ayaa sheegtay in 24-kii saac ee la soo dhaafay in cudurka COVID-19 laga helay 26 qof, iyada oo sidoo kale shaacisay in xanuunka maanta ka bogsadeen 8 bukaan, halka 24-kii saac ee la soo dhaafay uu hal ruux u geeriyooday caabuqan.
Tirada guud ee ka bogsatay Coronavirus gudaha Soomaaliland ayaa ah 48 qof iyada oo guud ahaan xanuunkan ay u geeriyoodeen 22 ruux.
Guud ahaan Soomaaliland waxaa cudurkan kiisaska laga helay ay gaarayaan 358 kiis.